Kutheni kwaye njani umda yayo contractual eyimali. Mathias Abaqondisi-Mthetho - Abaqondisi-mthetho ka-Us-intanethi!
Kutheni kwaye njani umda yayo contractual eyimali. Mathias Abaqondisi-Mthetho
Kwimeko apho i-breach a contractual obligation, omnye umntu defaulting engages yakhe contractual uxanduva
Oku kuthetha ukuba uya kuba ukuhlawula ukuba umntu aggrieved a sum intended ukuba lungiselela umonakalo othe yintsholongwane yayo default.
Kubalulekile iselwa kunokwenzeka ukuba umda yayo contractual eyimali ukuze isakhelo i-zoko a breach. Njengoko i-service provider, umda yayo contractual eyimali ikuvumela ukulawula imingcipheko yalo mcimbi. Enyanisweni, kubekho ebandakanya ukongamela ngobulumko, i-mali zoko a olwaphulo kusenokuba kakhulu costly, ingakumbi kuba ukuqala-phezulu okanye ELINCINANE SME. Kuya kufuneka kanjalo ukumbule ukuba ngemiba eyimali ingaba elizimeleyo ye-coverage i-inshorensi underwritten. Kuba umthengi, kwemida yomthetho contractual eyimali lomnye umntu zibe kho into ka negotiation Umzekelo, kuyenzeka ukuba uyavuma kwi ukunyinwa kobutyala kwi-exchange a ukuphumela ixabiso ngenxa yoncedo, faculties ka-ukuphelisa facilitated kuba umxhasi, njalo-njalo Ekugqibeleni, u-amaqela unako ukufumana ngokufanayo inzuzo kwi-sikhokelo somgaqo-contractual eyimali. Inkcazelo iimeko kuba eyimali, umonakalo othe igqunywe kwaye abo ayifakwanga kuya kuvumela amaqela, kwimeko ukungaphumeleli, ngokukhawuleza, ngokwesivumelwano kwi kangakanani umonakalo kwi-lungiselela kwaye njalo uphephe leqela le-exchange ukuba unako umngeni e kukuba unike nethuba ukuba uqhubeke contractual budlelwane obandakanyekayo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuba strictly kwalelwe ukuba angenise clauses limiting eyimali kwi-izivumelwano kunye abasebenzisi bamanzi.
Ijaji ziya kuqwalaselwa ngokuzenzekelayo njengoko abusive, kwaye ndiya cima isicelo: ngumsebenzi omnye clauses presumed ukuba abe akulunganga ngoko ke conclusive, njengoko zidweliswe inqaku R- consumer Ikhowudi. Kwi-izivumelwano ndagqiba phakathi iingcali, okanye izivumelwano,"BB", kuyenzeka ukuba uyilo i-contractual eyimali, kodwa oku malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ngu inesakhelo. Kule intlonipho, akuvumelekanga ukuba umda i-eyimali ka elinye iqumrhu amaqela ukuze ngolo kangakanani ukuba kuyimfuneko izibophelelo imposed kwi kuye ingaba emptied ka-izinto zabo. Umzekelo, wenziwe sigwetywe kwi-famous meko umthetho Chronopost i, ukuba lokulingana limiting i-imbuyekezo ziyabhatalwa yi-inkampani Chronopost i-mere refund lezothutho iindleko ihlawulwe ngomoya wakhe umxhasi kwakuphikisana ithuba layo nokuzinikela ukunikezela i-trick kwi umbuzo kwi limited ixesha nexesha. Le meko umthetho omiselwe kutshanje isetyenziswe kuyo izivumelwano Kwi isigqibo ebhalwe ishumi elinesithathu kweyomnga ngowama, njengejaji Inkundla isibheno ka-Reims sele ayifakwanga isicelo a ukukhutshwa ukusuka eyimali apho wathi, langoku kunjalo, ecaleni"nayiphi na kwaye zonke eyimali nompapashi njengoko iziphumo kwaye ngayo isoftwe, apho clauses koko limiting eyimali ingaba inzima ngakumbi ukuba bucala yi-ijaji. Evidenced ngokuthi u-izigwebo Wenkundla ka-isibheno of Paris, dating emva ishumi elinesithathu kwaye elinesithandathu kweyomnga ngowama. Umgwebi wathi isemthethweni izibonelelo severely limiting i-eyimali a service provider, zinika kuvuka ukuba imbuyekezo sele akukho tyala komlinganiselo kunye ukuthelekisa umonakalo intlungu yi-umxhasi (Inkundla isibheno of Paris, ishumi elinesine kweyomnga ngowama- n° kwaye Inkundla isibheno of Paris, ishumu elinesithandathu kweyomnga ngowama- n°). Ezi clauses zithe mbasa ukuba abe ngokusemthethweni ngenxa yokuba musa deprive omnye umntu ka-imbuyekezo kwimeko apho i-breach.
I-sagas jurisprudential Chronopost kwaye Faurecia zithe ibandakanywe komhlaba umthetho ka-izivumelwano.
I-mda, imiselwe lisebe legislator kwi - inkululeko isakhelo yayo contractual eyimali ngoku ivakalisa ngaphaya clauses limiting okanye exonerating i-wonke ukususela eyimali. Inqaku ka-zasekuhlaleni Ikhowudi ngoku ichaza ukuba"nayiphi na lokulingana apho deprives ngayo yayo izinto i-kubalulekile obligation ye-debtor sithathwa kuba unwritten". Ukongeza, komhlaba ka-isivumelwano umthetho sele ungeniswa i-inqaku entsha kwi-zasekuhlaleni Ikhowudi, enikezela ukuba"isivumelwano ka-adhesion, nayiphi na lokulingana ukuba yenza ebalulekileyo imbalance phakathi amalungelo nezibophelelo zethu zamaqela nemvumelwano uya kuthatyathwa unwritten. I-appreciation ye-ezibalulekileyo imbalance akekho malunga engundoqo, ngokulawulwa mba ye-isivumelwano okanye kwi-adequacy ka-ixabiso ukuba ukunikezelwa". Kukhumbula ukuba i-adhesion isivumelwano icacisiwe kwi inqaku ka-zasekuhlaleni Ikhowudi njengoko"omnye apho imimiselo nemiqathango, ngokulawulwa negotiation, zimiselwe kwangaphambili ngo zamaqela". Kubalulekile ngoko ke kubalulekile ukuba abe attentive ukuba drafting ka-clauses limiting okanye exonerating i-wonke ye uxanduva ngaphakathi izivumelwano. Enjalo lokulingana akanalo ukukhokela ukuyenza non-existent, contractual izibophelelo omnye umntu okanye ezinye. Kwi-sikhokelo somgaqo-isivumelwano ka-adhesion, ayisayi kuba kunokwenzeka ukuba amisele inkqubo ukunyinwa kobutyala ngu ubunzulu, apho omnye co-omhlaba wayeya kuba netyala ngaphandle kwezixhobo zokusebenza kuba na uhlobo umonakalo xa omnye izakuba uxanduva lwakhe kakhulu limited. Mathias abaqondisi-mthetho ubizwa e yakho ukulahlwa ukukunceda kwi-negotiation kwaye drafting yakho izivumelwano.
Imisebenzi Lawyer - Cameroun
finanzdirektor in der insolvenz natürlicher personen: anforderungen, rechte, pflichten